OS X အယ်လ် Capitan ယခုရရှိနိုင် | ငါက Mac ကပါ
အက်ပဲလ်ဟာ OS X El Capitan 10.11 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
OS X El Capitan ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းသည် Mac အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရပြီဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး Mac App Store မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ယင်းကိုတင်ပြပြီးနောက်လအနည်းငယ်ကုန်လွန်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်လူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Mac မှဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယခုခေတ်တွင် OS X El Capitan ၏အသစ်အဆန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ကြည့်ရှု့ပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာရှိပြီးသား သန့်ရှင်း install လုပ်ပါ အသစ်က operating system ကို၏။ ဤသင်ခန်းစာသည် tool ပေါ်တွင်အခြေခံသည် DiskMaker X ကို နှင့် 8GB USB သို့မဟုတ် SD ကဒ်ကိုလိုက်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုရှိရန်အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်။
OS X El Capitan သည်ယခင် OS X Yosemite ၏မျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာပြုပြင်ပြောင်းလဲသော်လည်း၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် download နှင့်အတူပြproblemsနာများစွာရှိပုံမရသော်လည်း download ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသောသုံးစွဲသူများစွာလာရောက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်နှေးသည်။ သည်းခံခြင်း.
လူမှုရေးကွန်ရက်များဖြစ်သောဖေ့စ်ဘုတ်၊ တွစ်တာ၊ ဂူဂဲလ် + မှသော်လည်းကောင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသော်လည်းကောင်း Soy de Mac အဖွဲ့အားမေးခွန်းများမေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်၊ သင်တပ်ဆင်သည်အောင်မြင်ပါစေ၊ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကူညီပေးပါမည်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပ်ဆင်မည့်တစ်ခုသို့မဟုတ် OS X Yosemite ၏ထိပ်တွင်တိုက်ရိုက်မွမ်းမံမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » အက်ပဲလ်ဟာ OS X El Capitan 10.11 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
Neira တွင် Miguel တွင် ဟုသူကပြောသည်
download ဘယ်လောက်လေးလဲ .. ?
Miguel On Neira အားပြန်ပြောပါ
Raul Rojas ဟုသူကပြောသည်
Raúl Rojas အားပြန်ပြောပါ
Gam Villa သို့ပြန်သွားပါ
ဟိုဆေး Fco Cast ဟုသူကပြောသည်
Puffff ကျွန်ုပ်သည် ၁၅ ရက်တာကြာလိမ့်မည် Kaballos aes ၅၆ လုံးနှင့်အတူနေဆဲ
Jose Fco Cast ကိုစာပြန်ပါ
Mario မာတင် ဟုသူကပြောသည်
10.9 မှ update ကို install လုပ်သောအခါ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး installation ကိုမပြီးဆုံးသေးပါ
တပ်ဆင်မှုမပြီးသေးပါ သူသည်ပန်းသီးနှင့်တိုးတက်မှုဘားကိုအဆုံးအထိသိုထားသော်လည်းပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
မင်္ဂလာပါ Esmeralda, အဆုံးမှာဖြစ်စဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာလဲ
ကောင်းပြီ၊ ငါနည်းနည်းလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ recovery mode နဲ့ disk utility ကိုသွားတယ် (disk တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ)၊ ငါဘာသိရလဲ ... အခုငါထပ်မံဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ အဲဒါကို install လုပ်နေပုံရတယ်။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် ... ငါဒီလိပ်နှင့်အတူအချိန်ဆုံးရှုံးမှုအစီရင်ခံပါလိမ့်မယ်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်းအရံကူးထားသည့်ပြင်ပ disk ကိုယခုမသိပါ။ Ufffff ဘာအိပ်မက်ဆိုး
ကောင်းပြီ, အဆုံး၌ငါအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ disk တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။ လာကြ၊ အရမ်းသန့်ရှင်းလာတယ် ကျွန်ုပ်သည်စာရွက်စာတမ်းများကို Time machine ဖြင့်ပြန်လည်ရယူပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သော Apps ကိုထည့်သွင်းပါမည်။ တစ်လိပ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘာလုပ်ရမှန်း ...
OS X El Capitan ကို scratch မှဘယ်လို install မလဲ
Mac အတွက် Safari အတွက် OS X El Capitan မစတင်မီ update လုပ်သည်